Bahamas na-ebupụta ahụmịhe mmadụ na mmadụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Bahamas Breaking » Bahamas na-ebupụta ahụmịhe mmadụ na mmadụ
Akụkọ Bahamas Breaking • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Caribbean • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • investments • News • Iwughachi • Safety • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ahụmịhe ndị mmadụ na-ewetara ndị hụrụ njem njem n'anya n'ụlọ ndị Bahamians ka ha mụta ịgba egwu, esi nri na ndị ọzọ.
Ruo ihe karịrị afọ 45, Mmemme Ndị Mmadụ Na-ejikọ ndị ọbịa na ndị obodo site na ahụmịhe ahaziri iche.
Ndi mmadu aghaghi ihieputa ihe omuma Bahamas n'ihi na ha adighi abanye ugbo elu.
A na-edozi usoro nke ọma maka obere ndị na-akpachi anya na-ebi ndụ na ndị ọbịa obodo, na-enye ohere maka ezigbo mkparịta ụka na ezigbo njikọ site na ịkekọrịta ọdịbendị na ọdịnala Bahamian.
Taa, Bahamas Ministry of Tourism & Aviation na-eweta ndị a hụrụ n'anya Ndị Mmadụ Na-Ndị Mmadụ Mmemme gaa na usoro ọhụụ site na usoro ntanetị nke ga-emepụta njikọ oge maka ndị njem iji nweta nnabata ọbịa na ọdịbendị bara ụba nke ndị Bahamian. Ruo ihe karịrị afọ 45, Mmemme nke Ndị Mmadụ na-ejikọ ndị ọbịa na ndị obodo site na ahụmịhe ahaziri iche na Islands niile nke The Bahamas.
Site na ịgba ọgwụ mgbochi na ịrị elu na ntụkwasị obi njem na-arịwanye elu, The Bahamas na-atụ anya ịnabataghachi ndị njem mgbe ọ bụla ha họọrọ ileta. Agbanyeghị, ndị na-adịghị njikere ime njem ugbu a, ga-enwe obi ụtọ ịmara na ha ekwesịghị ịhapụ ezigbo ahụmahụ Bahamas naanị n'ihi na ha anaghị abanye n'ụgbọelu.
Prestigious 2021 MICHELIN Guide Malta na-enye kpakpando ụlọ oriri na ọ moreụ twoụ abụọ ọzọ
Princess Cruises na-ekwuwapụta ụgbọ mmiri 2022-2023 Mexico, California, Hawaii na Tahiti